Charles Simic ane zuva rekuzvarwa. Dzimwe dzenhetembo dzake | Zvazvino Zvinyorwa
Bhavhudhe raCharles Simic. Dzimwe dzenhetembo dzake
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Nhetembo, dzakawanda
Un May 9 we1938 akaberekwa Charles simic, Mudetembi weAmerica akaberekerwa muBelgrade uyo anobata munhetembo dzake dzehupenyu hwazvino. Zvanga zviri Pulitzer Mubairo wenhetembo muna 1990 uye ichiri kuzivikanwa se rimwe remazwi makuru yemamiriro enhetembo epasi rese. Ndinoita sarudzo yemamwe enhetembo dzake.
1 Ndiani Charles Simic
1.1 Mamwe mabasa
2.0.1 Kubva kuNhetembo dzakasarudzwa
Ndiani Charles Simic
Akazvarirwa mukati Belgrade muna 1938. Muna 1943 baba vake vakatamira kuUnited States (Aive injinjini uye basa rake rakanga ramuita kuti awane vanhu vazhinji vaaibata navo). Vamwe vese vemhuri, Charles, amai vake uye munin'ina, havana kukwanisa kusangana naye vakakwira 1954. Ikoko vakagara muChicago. Charles akapedza chikoro chesekondari, asi haana kuenda kuyunivhesitiPane kudaro, akatanga kushanda nekunyora nhetembo. Mushure mekuita basa remauto muna 1961 aive yakatumirwa kuGerman neFrance semapurisa echiuto.
En 1968 akaburitsa bhuku rake rekutanga, Zvinotaurwa nehuswa. Akadzidzisa mabhuku paUniversity yeCalifornia uyezve kuNew Hampshire kwaanoramba achishanda nanhasi. Yakaburitsa anopfuura mabhuku makumi matanhatu, pakati pavo imwe muprose, Hupenyu hwemifananidzo. Yekupedzisira ndeye Kukwatirwa murima, yakabudiswa muna 2018.
Inotarisirwa mumwe wevanyori vekare veChirungu-vanotaura nyanduri uye vanyori, asi anoyemurwawo zvikuru panhetembo yepasi rose Akakunda 1990 Pulitzer Mubairo weNhetembo uye zvakare ari Nyanduri Mubatsiri weUnited States.
Nyika haigume nedzimwe nhetembo
Nhunzi muchizoro, iyo inounganidza ndangariro dzavo.
Izwi kumaXNUMX mangwanani
akarembera pambiru yechigadziko
zvese uye imwe neimwe.
vadzorere kuna sender.
Ngarava yemweya yehupenyu hwangu
Mujeri redu iri
Iko mutariri akangwara kudaro
zvekuti hapana kana anozviona
ita denderedzwa rako,
unofanirwa kushinga kwazvo
kubaya pamadziro esero
kana mwenje wadzimwa
kana zvisiri zvengirozi huru dzedenga,
hongu kune avo vakatongerwa gehena.
Foni isina mutsara
Chinhu kana mumwe munhu wandisingakwanise kutumidza zita
zvakaita kuti ndigare pasi ndigamuchire mutambo uyu
Ndinoramba ndichitamba makore akazotevera
vasingazivi mitemo yavo kana kuziva zvechokwadi
ndiani anokunda kana kukundwa,
zvakanyanya sekukanganisa kwandakaita pfungwa dzangu ndichidzidza
mumvuri wandinoratidzira kumadziro
semunhu anomirira usiku hwese
kufona kubva kufoni isina line
achizviudza kuti pamwe zvinonzwika.
Runyararo rwakandikomberedza rwakanyanya
kuti ndinonzwa ruzha rwemakadhi akavharidzirwa,
asi pandinotarisa musana wangu, ndisina kugadzikana,
pane fusi chete pahwindo,
pfungwa dzake dzekushaya hope uye dzisina hunina sedzangu.
Kubva kuNhetembo dzakasarudzwa
Uye isu takasvipa meno edu.
Katsamba kakatsvedza pasi pemusuwo
Ndakaona hwindi refu rakapofomadzwa
Pakazovira zuva zuva.
Neminwe yakawanda yerima
Ndakaona muapuro wakare
Shawl yemhepo pamapfudzi ake,
Kufambira mberi kusurukirwa zvishoma nezvishoma
Nzira yezvikomo zvisina mvura.
Ndakaona mubhedha usina kugadzirwa
Uye ndakanzwa kutonhora kwemachira ake.
Ndakaona nhunzi yakanyoroveswa nerima
Kutarisa kwandiri nekuti ini handina kukwanisa kubuda.
Ndakaona matombo anga auya
Kubva kure kure nepepuru
Kuunganidzwa uchitenderedza musuwo wepamberi.
Kutya kunopfuura kubva kumunhu kuenda kumunhu
Seshizha rinopfuura richidedera
Pakarepo muti wese wave kudedera
Uye hapana chiratidzo chemhepo.
Ichi chigaro chaimbove mwana weEuclid.
Bhuku remitemo yake rinogara pachigaro chake.
Mahwindo echikoro aive akavhurwa
Saka mhepo yakachinja mapeji
Kuita zevezeve nemiedzo ine mbiri.
Zuva rakavira pamusoro pedzimba dzegoridhe.
Kwese kwese mimvuri yakareba
Asi Euclid haana chaakataura nezvemhando iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Bhavhudhe raCharles Simic. Dzimwe dzenhetembo dzake
Nhoroondo yerufu rwakaziviswa rwaGabriel García Márquez
Anika entre Libros, wekutanga mabhuku ebhuku muSpanish, akaberekwa muna 1996.